စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုခံစားပါ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > အတှေ့အကွုံစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို
အနောက်နိုင်ငံများသည်ဤမျှမြင့်မားသောလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်ဘယ်သောအခါမျှမွေ့လျော်ခံစားခဲ့ရသဖြင့်ယနေ့လူအများစုကအရေးမပါကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအလွန်မြင့်မားသောအချိန်တွင်စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိရွေ့လျားနေစဉ်အတွင်းချစ်ရသူများနှင့်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်မရွေးဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ WhatsApp၊ Facebook သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအားလုံးကိုသင့်ထံမှသိမ်းယူပြီးအပြင်ကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသည့်သေးငယ်သောဆဲလ်သေးသေးလေးတစ်ခုတွင်တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့မည်ဆိုလျှင်သင်မည်သို့ခံစားရမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကျဉ်းထောင်များတွင်အကျဉ်းချခံထားရသူများဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Supermax အကျဉ်းထောင်များရှိပြီးအကျဉ်းသားများသည်အထီးကျန်နေသောဆဲလ်များအတွင်းသော့ခတ်ထားသည့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးရာဇ ၀ တ်သားများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့သည်အခန်း ၂၃ နာရီနှင့်တစ်နာရီကြာအိမ်ပြင်တွင်လေ့ကျင့်ကြသည်။ အပြင်၌ပင်ထိုအကျဉ်းသားများသည်လေကောင်းလေသန့်ရရှိစေရန်လှောင်အိမ်ကြီးထဲတွင်လှုပ်ခတ်နေသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထိုကဲ့သို့ထောင်ကျနေပြီးထွက်ပေါက်မရှိတော့ကြောင်းသင်သိလျှင်သင်ဘာပြောမည်နည်း။
ဤသည်ထောင်ဒဏ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်စိတ်တွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများသည်ပိတ်ဆို့ခံထားရပြီးစစ်မှန်သောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နှင့်သိကျွမ်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိရန်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုစနစ်များ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်လောကဗဟုသုတများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားထောင်ချထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာကကျွန်မတို့ကိုတစ်ယောက်တည်းချုပ်နှောင်ထားတာကိုပိုပြီးနက်ရှိုင်းအောင်တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်။ ငါတို့မှာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ရှိသော်လည်းဤထောင်ချမှုကဝိညာဉ်ရေးအထီးကျန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်သော့ခတ်မှုကိုဖွင့်ပြီးအပြစ်၏ကျွန်ဘဝကိုလွှတ်လိုက်မှသာငါတို့ထောင်မှလွတ်မြောက်နိုင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ငါတို့လွတ်မြောက်ရေးလမ်းကိုပိတ်ဆို့သောသော့ခလောက်များအတွက်သော့များရှိသည်။
Wahre Freiheit kommt nicht durch Reichtum, Macht, Status und Ruhm. Die Befreiung kommt, wenn unser Geist für den wahren Zweck unserer Existenz geöffnet wird. Wenn diese Wahrheit in den Tiefen unserer Seele offenbart und verwirklicht wird, schmecken wir wahre Freiheit. «Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen» (Johannes 8,31-32) ။
Wovon werden wir befreit, wenn wir wahre Freiheit schmecken? Wir werden von den Folgen der Sünde befreit. Sünde führt zum ewigen Tod. Mit der Sünde tragen wir auch die Last der Schuld. Die Menschheit sucht nach verschiedenen Wegen, um frei von der Schuld der Sünde zu sein, die Leere in unseren Herzen verursacht. Egal wie wohlhabend und privilegiert man ist, die Leere im Herzen bleibt bestehen. Der wöchentliche Kirchgang, Wallfahrten, Wohltätigkeitsarbeit und gemeinnützige Hilfe und Unterstützung mögen vorübergehend Linderung verschaffen, aber die Leere bleibt bestehen. Es ist das am Kreuz vergossene Blut Christi, der Tod und die Auferstehung Jesu, die uns von dem Lohn der Sünde befreit. «In ihm (Jesus) haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit» (Epheser 1,7-8) ။
၎င်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်၏သခင်၊ ကယ်တင်ရှင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသောကြောင့်သင်ရရှိသောကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်၏အပြစ်များအားလုံးခွင့်လွှတ်ခံရသည် သင်သယ်ဆောင်ထားသော ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နှင့်တိုက်ရိုက်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ပြုပြီးပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဘဝကိုစတင်သည်။ သင်၏ဝိညာဉ်ရေးအကျဉ်းထောင်မှသင်တို့အတွက်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။ သင်၏တစ်သက်တာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တံခါးဖွင့်ထားသည်။ သင်သည်စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသင်၏တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဆန္ဒများမှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ လူများစွာသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဆန္ဒများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာကျွန်များဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်အမျှသင်၏နှလုံးသည်ဘုရားသခင့်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရန် ဦး စားပေးသောအသွင်ပြောင်းမှုကိုခံလိုက်ရသည်။
«So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade» (Römer 6,12-14) ။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအာရုံစိုက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည်သခင်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေနှင့်အမြဲတမ်းအဖော်အဖြစ်ထားလိုသောအချိန်တွင်ဘဝတစ်ခုလုံးသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်နားလည်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့အတွေးထက်ကျော်လွန်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုဘုရားသခင့်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အကျိုးများစွာရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောတပ်မက်ခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ မုန်းတီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊
ယနေ့သင်၏ထောင်တံခါးကိုယေရှုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ သင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအသွေးကို၎င်း၊ ယေရှု၌အသစ်သောအသက်တာသို့လာပြီးပျော်ရွှင်ပါ။ သင်၏သခင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုခံစားပါ။
Devaraj Ramoo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်